Jirama : Ny famatsiana solika no olan’ny jiro ao Manakara -
AccueilSongandinaJirama : Ny famatsiana solika no olan’ny jiro ao Manakara
Jirama : Ny famatsiana solika no olan’ny jiro ao Manakara
07/03/2018 admintriatra Songandina 0
Maizina mandritra ny 24 ora eo ho eo isaka ny roa andro ny ao an-tampon-tanànan’i Manakara noho ny fahatapahan’ny jiro. Noho izany, dia tsy misy izay tsy mimenomenona ny mponina any an-toerana, indrindra ireo manana orinasa mila jiro mavesatra hampihodinana azy.
Raha ny fanazavan’ny teo anivon’ny orinasa Jirama tany an-toerana, noho ny tsy fahampian’ny solika manodina ireo milina mpamokatra herinaratra no mahatonga ny fahatapahana maharitra ora maro ao amin’ny distrikan’i Manakara sy ny manodidina azy. Nitondra fanazavana mahakasika izay kosa ny teo anivon’ny Jirama foibe fa noho ny fahataran’ireo mpamatsy solika ho an’ny orinasa Jirama no anton’ny tsy fahampian’ny solika. Izany hoe, tsy tonga ara-potoana araka ny filàn’ny Jirama any an-toerana ny famatsiana. Noho izay indrindra, dia voatery manapaka jiro ny eo anivon’ny orinasa Jirama, arakaraka ny fitsinjarana sy filàn’ny mponina ao Manakara sy ny manodidina.
Maro araka izany, ireo orinasa any an-toerana no milaza fa mampiteraka fatiantoka ho azy ireo ny fahatapahan’ny jiro maharitra ora maro. Marihina mantsy fa ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoana no tena betsaka any Manakara, izay tena mila jiro andro aman’alina.
Na izany aza anefa, dia maro ireo orinasa any an-toerana, eny hatramin’ny olon-tsotra aza, no efa mampiasa ireny angovo azo avy amin’ny masoandro ireny mba hampihodinany ny andavanandrom-piainany.
Ankoatra izay,dia nanazava ny talen’ny serasera eo anivon’ny Jirama fa tsy ny ao Manakara ihany no hitrangan’io olan’ny fahatapahan-jiro maharitra io fa amin’ireo faritra maro manerana an’i Madagasikara. Noho ny fahataran’ny famatsiana hatrany, raha ny voalaza, no antony goavana mahatonga izany. Notsiandrian’ity tompon’andraikitra iray ao amin’ny Jirama ity fa hivaha tsy ho ela ny olan’ny jiro amin’ireny faritra ireny.
Tatitry ny banky iraisam-pirenena:NAHITANA FIAKARANY 4.1% NY HARIKARENA FAOBE
Niakatra 4.1% ny tahan’ny harikarena faobe, fiakarana mihoatra ny fitomboan’ny mponina izay manodidina ny 2.1% tamin’ity taona 2016 ity. Io no tatitra navoakan’ny banky iraisam-pirenena ny faran’ny herinandro lasa teo, porofo izany fa miroso tanteraka ...Tohiny